कुन बार कुन देवताको ब्रत बस्ने? यसरी राख्नुस बारअनुसार भगवानको ब्रत! – PathivaraOnline
Home > राशिफल > कुन बार कुन देवताको ब्रत बस्ने? यसरी राख्नुस बारअनुसार भगवानको ब्रत!
admin February 2, 2019 राशिफल 0
हप्ताको हरेक दिन कुनै न कुनै भगवान्लाई समर्पित गरिएको हुन्छ । प्रत्येक दिन कुनै न कुनै भगवानको पूजा गर्ने गरिन्छ यस्तै हप्ताको हरेक दिन कुन भगवानको ब्रत बस्ने भनेर पनि छुट्टाईएको छ । प्रत्येक विशेष दिनमा उपवास सम्बन्धी फाईदाहरू पनि अद्वितीय रहेका छन् । धार्मिक शास्त्र अनुसार यस्तो रहेको छ बारअनुसार भगवानको ब्रत: